2 Xirfad oo cajiib ah oo fanaanka Faarax Murtiile uu dheeryahay Fanaaniinta kale - Aayaha
Aayaha editorFebruary 23, 2019
Inta badan fannaaniinta xirfaddoodu waxay ku saleysan tahay dhinaca fanka iyo Suugaanta, laakiin Faarax murtiile oo ah fannaan caan ka ah bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda wuxuu BBC-da u sheegay in uu leeyahay xirfado kale oo uu qoyskiisa ugu shaqeeyo.
Murtiile oo sidoo kale ah Abwaan ah ayaa wareysi uu BBC-da ku siiyay magaalada Garoowe shaaca uga qaaday inuu si wanaagsan u yaqaanno xirfadda cunto karinta, taasoo ah mid ragga Soomaaliyeed ee leh ay dhif iyo naadir yihiin.
“Cunnada nooc walba waan kariyaa, iyo xitaa raashinka isku dhex kariska ah. Maalinta aan galo Madbakha(Jikada), ciyaalkeygu aad bay u farxaan, waayo waxaan si aad u fiican ugu kariyaa raashinka ay jecel yihiin sida bariiska, baastada iyo wax walba”, ayuu yidhi Faarax.
Xirfadda cunto karinta ayaa la shegaa in ragga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay danta ku kallifto, balse Faarax Murtiile wuxuu sheegay in isagu uu yahay “Kuuk” xirfad heer sare ah u leh cunto karinta.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in xirfad ahaan ka sokow ay fiican tahay in dumarka xaasaska ah ay caawinaad ka helaan raggooda isla markaana ay la qabtaan howlaha gaarka ah ee guriga.
“In dumarka lala shaqeeyo way fiican tahay, sababtoo ah ragga waxaa laga doonayaa iney kaalintooda ka qaataan howlaha guriga. Annaga waxaa na badday danta qurbaha, waayo marka ay xaaskaagu xanuunsato waxaad ku khasbanaaneysaa inaad la wareegto howsha guriga, maadaama aysan jirin qaraabo ku caawineysa oo qurbaha kula joogta”, ayuu yidhi Abwaan Murtiile.
Dhanka kale Faarax ayaa noo sheegay inuu leeyahay xirfad kale oo qeyb ka ah farsamada gacanta.
Mar uu xirfaddaas sharraxayay ayuu yidhi: “Waxaan garanayaa sida dharka loogu tolo harqaanka, xaaskeyga haddii ay maro ka jeexanto durba waan toli karaa, sidoo kale waxaan garanayaa sida loo tolo diracyada bacweynaha la yiraahdo”.
Ragga Soomaaliyeed qaarkood ayaa ceeb u arka in jikada la galo oo raashinka la kariyo ama in qeyb laga qaato howlaha kale ee guriga, sida dhaqista dharka, xannaaneynta carruurta iyo waxyaabaha la xiriira.
Laakiin Faarax Murtiile ayaa sheegay in marka qurbaha la joogo ay shaqooyinkaasoo idil dan keeneyso, wax ceeb ahna aan loo arkeynin.